Mihozongozona Ny Fitondrana Ao Iran Mialoha Ny Fifidianana Ho Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2012 7:02 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Fifandraisana Iraisampirenena & Fiarovana
Sadegh Larijani, Filohan'ny Fahefam-pitsarana ary ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad. Avy amin'ny Baztab.net (fampiasàna nahazoana alàlana).
Ny 22 Oktobra 2012, nanoratra taratasy misokatra tsy mbola nisy toa azy ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad ho an'ny fitsarana ao Iran miampanga azy ireo ho mitondra tena mifanohitra amin'ny lalam-panorenana tamin'ny nanakanan-dry zareo azy tsy hitsidika ilay Fonja malaza ratsy ao Evin , Tehran, toerana izay ifonjan'ilay mpanolotsainy amin'ny serasera , Ali Akbar Javanfekr, amin'izao fotoana.
Tao anatin'ilay taratasy, nampahafantatra i Ahamdinejad fa nisy fampitam-baovao iray “top secret / fampitam-baovao faran'izay miafina” naparitaky ny filohan'ny fitsarana, Sadegh Larijani izay nilaza fa ny fangatahan'ny filoha hitsidika an'i Evin dia tsy mitondra tombontsoa velively ho an'i firenena. Milaza i Ahmadinejad fa maniry izy ny hanadihady ny fepetra iainan'ireo voafonja.
Ity rivo-pifandonana henjana ity dia niteraka resabe maro teo amin'ireo Iraniana mpikirakira aterineto sy ny fiarahamonina sivily. Betsaka ireo tranonkala mpanohitra sy mpanao gazety, ohatra, no nihevitra fa ilay taratasin'i Ahmadienjad dia tsy misy mihitsy hifandraisany amin'izay resaha fitsarana sy zon'olombelona, fa mariky ny toerany mitsingilahila manoloana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ho avy amin'ny 2013.
Iran Green Voice manamafy [fa] fa fifandonana mazava mialoha ny fifidianana eo amin'ireo samy sampana manohana ny fitondrana izao. Ireo mpiara-dia fahiny tamin'i Ahmadinejad no lasa fahavalony ankehitriny, ary mampiakatra hatrany ny tsindry mahazo azy.
Nooshabe Amiri, mpanao gazety iray monina any Eoropa, miteny ao amin'ny Roozonline [fa] fa io dia “adin'amboadia” ary i Ahmadinejad izy tenany mihitsy no endrika hita mason'ny fanitsakitsahana ny zon'ireo Iraniana.
Azarak mihevitra fa i Ahmadienajd dia filoha sarintsariny [fa] izay miezaka maka ny fon'olona sy fanohanana ao anatin'izao volana vitsy itondrany izao, raha ireo mpifaninana aminy avy ao anatin'ny fitondrana kosa, toa an'i Larijani, tsy mamela azy haka aina. Ilay bilaogera dia mamoaka izao fandalinana manaraka izao mikasika ny ho fandehany:
1- Tsy te-hanome azy vintana mihitsy na kely aza ireo manampahefana ao anatin'izao volana faramparany itondrany izao mba hahafahany mampiasa ireo olana saropady, toy ny fomba fitondra ireo gadra noho ny politika, hanatsaratsarany endrika manoloana ny vahoaka.
2- Ratsy dia ratsy ny zava-misy any am-ponja ka hatramin'ny filoha avy no tsy tsara ampahafantarina azy ireny sy hampiasa azy ireny ho toy ny karatra enti-mandresy manoloana ireo mpanohitra azy.
3- Maniry i Ahmadinejad hampiseho amin'ireo mpanohana azy fa zava-tsarobidy aminy ny momba azy ireo, saingy ny fitsarana kosa tsy maniry ny hanome azy izany vintana izany.
4- Io dia lalao iray ka ny fitondràna miezaka ny mamorona ny fisian'ny fanoherana avy ao anatiny, hanomezana safidy ny vahoaka hisafidy ny ratsy sy ny faran'izay ratsy amin'ny hoavy. Ny sampam-pitsikilovan'ny fitondrana sy ny mpandini-draharahany dia miketrika mametraka izany endri-dalao izany.
Arman manoratra hoe [fa]:
Ny taratasin'i Ahmadinejad ho an'i Larijani, filohan'ny fitsarana, dia taratasy famakiana ady amin'ny Mpitarika Ambony, Ayatollah Khamenei. Tsy misotro rano ny filohan'ny fitsarana raha tsy efa avy nangataka alalana avy tany amin'i Ayatollah Khamenei, izy indray dia tena mpanompo manatanteraka ny sitrapon'i Khamenei.
Tsy isalasalàna, ny anton'ny nanapariahana ilay taratasin'i Larijani ho an'i Ahamdinjead ho toy ny “fampitam-baovao faran'izay miafina” dia ny mba hamelàna an'i Ahmadinejad hahafantatra ny fomba fijerin'i Khamenei.
Saingy tsy noraisin'i Ahmadinejad ho tao anaty kajikajiny izay ary nokianiny tamin'ny teny henjana ilay taratasy.
Tanaty sariitatra iray navoaka tao amin'ny Mardomak sy teny anatin'ny mediam-bahoaka Iraniana, Mana Neyestani dia mampiseho an'i Ahmadinejad miafina ao anaty lobolobo iray miantso ilay mpanolotsainy amin'ny resaka serasera, miteny hoe “Hey Javanfekr, ao tsara ve ianao? Izaho ihany ity, Mahmoud.”
Kisarisary nataon'i Mana Neyestani tao amin'ny Mardomak (fampiasàna nahazoana alàlana)
Moeni, bilaogera iray monina ao Iran, izay matetika no manao fampiasàna sarinteny rehefa miresaka momba ny politika, miteny [fa] fa hafahafa sy ratsy ilay taratasin'i Ahmadnejad’… “na dia tsy hametraka fanontaniana momba ny maha-olo-marina an'i Ahmadinejad aza isika, izay nihevitra tampoka teo ny hitsidika ny fonja, volana vitsy monja mialoha ny fahataperan'ny fotoam-piasàny, ny taratasy toy itony dia natao fotsiny “hampientanentana” sy hanamaloka ny “fara-vodilanitra” [ny tontolo iainana politika manontolo].”
Ity lahatsoratra ity sy ny dikanteniny amin'ny fiteny Espaniôla, Arabo ary Frantsay, dia tohanan'ny International Security Network (ISN) ao anatin'ny fiaraha-miasa hikatsahana ny famoahana ny feon'ireo olon-tsotra mikasika ny olan'ny fifandraisana iraisampirenena sy ny fiarovana maneran-tany. Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny bilaogin'ny ISN, jereo ato ny tantara mitovitovy aminy.